Muxuu Baybalka ka dhahay qaniisnmada? Qaniisnimada ma dambi baa?
Su’aal: Muxuu Baybalka ka dhahay qaniisnmada? Qaniisnimada ma dambi baa?
Jawaab: Baybalka wuxuu si iswaafaqsan noogu sheegaa howsha qaniisnimada inay dambi tahay (Bilowgii 19:1-13; Laawiyiintii 18:22; Rooma 1:26-27; 1 Korintos 6:9). Rooma 1:26-27 wuxuu barayaa gaar ahaan in qaniisnimada ay tahay natiijada diidmada ama ka hor imaatanka Illaah. Markii dadka joogteeyaan dambiga iyo aaminsanaan la’aanta, Illaah “wuxuu siiyaa in kabadan” xittaa aad u xun iyo niyad ahaan xun si markaas loogu muujiyo iyaga hadal micno aan laheyn iyo rajo la’aanta ee Nolosha marka laga reebo. 1 Korintos 6:9 wuxuu sheegaa in qaniisnimada “dambiilayaal” ma dhaxlayo Boqortooyada Illaah.
God ma aasaaso qof leh rabitaanka qaniisnimada. Baybalka wuxuu noo sheegaa in dadka noqdaan qaniis sababtoo ah dambiga (Rooma 1:24-27) iyo ugu dambeyntii sababtoo ah dooqooda ugaarka ah. Qofka wuxuu ku dhalan karaan unuglaansho weyn ee qaniisnimada, sida dadka qaarkood ee ku dhasho adkaanta rabshada iyo dambiyada kale. Taasi kama cudur daarato dooqa qofka ee dambiga iyada oo la siinayo rabitaanada dambiga badan. Haddii qofka uu ku dhasho unuglaansho weyn ee xanaaqa/rabshada, taasi miyay u wanaajisaa inay siiso rabitaanadaas? Dabcan maya! Isla sidaas waa run qaniisnimada.
Si kastaba, Baybalka uma sharaxo qaniisnimada sida dambi “ka weyn” wax walboo kale. Dhammaan dambiga waxay ku tahay dambi Illaah. Qaniisnimada waa mid ka mid ah waxyaabo badan ee ku qoran 1 Korintos 6:9-10 ee ka joogteynayo qofka Boqortooyada Illaah. Sida waafaqsan Baybalka, cafiska Illaah waxaa loo heli karaa sida qaniisnimada ay ku tahay dhileysiga, isannam caabudka, ilaaga, tuuga, iwm. Illaah sidoo kale wuxuu balan qaaday xoojinta guusha oo dhinaca dambiga, oo ay ku jiraan qaniisnimada, oo dhammaan kuwa u aamInayo Ciise Masiixi badbaado (1 Korintos 6:11; 2 Korintos 5:17; Filiboy 4:13).